Anigu waxaan ahay gabar jirta-14-sanno. Ma la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay gabar jirta-14-sanno. Ma la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo?
Marka aynu dhahayno “galmo”, waxaan ula jeednaa dhammaan taabashada la taabto meelaha khaaska ah ama xubnaha taranka ah.
Dalka Jarmalka, midaani waa mid ka reeban guud ahaan kahor guurka.
Laakiin kaliya waxaa la oggolyahay marka ay labada qofba rabaan!
Sidoo kale waa caadi haddii aadan doonaynin in aad galmo samaysid.
Dalka Jarmalka, sharcigu wuxuu dhigayaa:
In ay reebantahay in qof lagu qasbo in uu galmo sameeyo.
Qofna looma oggola in uu ku qasbo.
Marwalba adiga waxaa laguu oggolyahay in aad dhahdid maya ama diidid.
Sidoo kale waad bedeli kartaa ra’yigaaga.
Waxaa dhici karta marka hore in aad doonaysay in aad galmo samaysid.
Khasab kuguma ahan in aad marwalba sidaasi dareentid.
Dadku ma rabaan in ay marwalba galmo sameeyaan.
Mararka qaar way wanaagsantahay in galmo la sameeyo mararka qaarna ma ahan mid wanaagsan.
Taasina waa arin caadi ah.
Adiga weli waxaad tahay qof aad u yar.
Uga fikir si taxadar leh waxa aad doonaysid.
Qayb kale, waxaad ka heli kartaa xadadka da’da go’an ee loogu talogalay galmada.
Posted on July 26, 2016 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Waxaan jeclahay gabar. Dhabtiina waxaan jeclahay in aan xiriir la sameeyo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
Next Next post: Qof aynu is naqaano ayaa ii sheegay in uu i jeceylyahay. Laakiin anigu ma jecli. Sidee ila gudboon in aan u dhaqmo?